Posted on November 18, 2013 by zawthwinကိုဇော်သွင်(စန္ဒယား နှင့် ကီးဘုတ်)	ယနေ့ နည်းပညာလောကမှာ လူပြောသူပြောများပြီး လူသိပ်မသိကြသေးတဲ့ ‘Cloud’ ဆိုတာကို ရှင်းပြလိုပါတယ်။ Cloud ဆိုတာဘာလဲ? Cloud ကို ဘယ်အချိန်မှာ သုံးကြလဲ? Cloud ဟာ သင့်စီးပွားရေးအတွက် ဘယ်လိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေလဲ စတာတွေပေါ့။ Facebook, Twitter စတဲ့ လူမှုကွန်ရက်တစ်ခုခု၊ ဒါမှမဟုတ် Google Drive လိုမျိုး ‘Online Storage’ တစ်ခုခုကို သုံးရင် သင်ဟာ Cloud သုံးသူ တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။
← YouTube က သီချင်းတွေ ကို စိတ်ကြိုက်ဒေါင်းယူနိုင်မယ့် Bigasoft Video Downloader	Symbian OS သုံး Nokia Touch Screen ဖုန်းတွေအတွက် မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့မြန်မာဖောင့်ပါ (3Mb) →